विद्युत प्राधिकरणमा लापरवाही : मिटरबक्स जडान गर्दासमेत उपभोक्ताबाट रकम असुली - Halesi Khabar
विद्युत प्राधिकरणमा लापरवाही : मिटरबक्स जडान गर्दासमेत उपभोक्ताबाट रकम असुली
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार २०:२७ ।
खोटाङ, २१ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरण खोटाङका कर्मचारीले उपभोक्ताको सेवामा चरम लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ । मिटरबक्स जडानमा अतिरिक्त शुल्क असुली, प्राधिकरणको कार्यालमै अवैधरुपमा एमसिबीको व्यापार, उपभोक्ताको घरमा लडान गरिएका मिटर रिडिङ तथा बिग्रिएको विद्युत मर्मतमा प्राधिकरणका कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको हो ।
दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताको घरमा विजुली बाल्ने योजनाका साथ प्राधिकरणले जिल्लामा विद्युतीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
विद्युतीकरण गर्नेक्रममा उपभोक्ताको घरमा मिटरबक्स जडान गर्दा निर्माणस्थलमा खटिएका प्राधिकरणका कर्मचारीले अवैधरुपमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले एकजना उपभोक्ताको घरमा मिटरबक्स जडान गर्दा रु ५०० देखि रु एक हजारसम्म रकम असुल्ने गरेको पाइएको हो ।
यतिसम्म कि मिटरबक्स लिन आउने उपभोक्तालाई प्राधिकरणकै कर्मचारीले कार्यालयमै अवैधरुपमा एमसिबी बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । बजारमा रु ४०० मा खरिद गर्न पाइने एलसिबी रु ६०० देखि रु एक हजारसम्म अवैधरुपमा उपभोक्ताबाट रकम लिएर कार्यालयबाटै बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हो ।
प्राधिकरणको कार्यालयमै अवैधरुपमा व्यापार गर्ने कर्मचारीमाथि अहिलेसम्म कसैले चासो नदिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । “मिटरबक्स लिन विद्युत प्राधिकरण जाँदा प्राधिकरणकै कर्मचारीले एमसिबीसमेत लानुपर्छ भनेर कर गर्‍यो”, नाम नभन्ने सर्तमा एक उपभोक्ताले भने, “होला त भनेर रु ८०० तिरेर एउटा एमसिबी लगेँ ! तर, बजारमा निस्केर त्यही एमसिबीको मुल्य सोध्दा रु ४०० मा पाइने रहेछ ।”
दिनमा दजनौँ पटक अवरुद्ध हुँदै आएको विद्युतको सही समयमा प्राधिकरणबाट मिटर रिडिङ नगरी ढिला गर्दा उपभोक्ताले हर्जनासहितको महसुल बुझाउन बाध्य छन् । महिनौँसम्म विद्युत मिटर रिडिङ नगर्दा सेवाग्राहीले चर्को हर्जना तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा प्राधिकरणले समयमै विद्युत मिटर रिडिङ नगरेएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यस्तोसम्म कि, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न लागू गरेको बन्दाबन्दीमा सरकारले छुट दिने निणर्य गरेपनि उक्त अवधिकोसमेत प्राधिकरणले हर्जना शुल्क लिएको पाइएको छ ।
हर्जनाबाट बँच्न मिटर रिडिङ गर्न आउने कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएर पठाउँदासमेत उक्त कर्मचारीले आफूहरुले पठाएको रकम प्राधिकरणमा नबुझाइ दिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-११ खार्मीका कुलबहादुर मगरले बताउनुभयो । “हामीले गाउँका सबैजना उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरेर रकम पठाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हर्जनासहितको बिल पुनः आएपछि छक्क परेका छौँ ।”
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा पाँच महिनामा एकैचोटी विद्युत मिटर रिडिङ गरिएको र हर्जनासहित चर्को महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको ऐसेलखर्क गाउँपालिका-३ ऐसेलुखर्क बजारका रमेश राजभण्डारीले बताउनुभयो । “एकैचोटी पाँच महिनामा मिटर रिडिङ गरियो”, उहाँले भन्नुभयो “प्राधिकरणले एकैचोटी मिटर रिडिङ गर्दा हर्जनासहित चर्को महसुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।”
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै रहेको त्यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिकामा चार महिनादेखि मिटर रिडिङ गर्न कर्मचारी गएका छैनन् ।
दुर्गम ठाउँहरुबाट विद्युत महसुल बुझाउन समस्या भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहमै कर्मचारी खटाउनुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् । “बिग्रिएको विद्युत मर्मत नहुँदा हप्तादिनसम्म अध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ”, केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख कृष्णकुमार राईले भन्नुभयो, “विद्युत प्राधिकरणमा देखिएको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्‍यो ।”
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ बुइपामा सवस्टेशन रहेको विद्युत पटकपटक अवरुद्ध हुने समस्याले उपभोक्ता हैरानीमा परेका छन् । लामो दूरी, जङ्गलको बाटो, होचो खम्बा र ठाउँठाउँमा पहिरो जानाले जिल्लामा पटकपटक विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
३३ केभी प्रशारणलाईन क्षमताको विद्युत विस्तार गरिएको जिल्लामा पटकपटक अवरुद्ध हुने केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत समस्या समाधानमा हालसम्म कसैको ध्यान पुगेको छैन । अवरुद्ध विद्युत मर्मत गर्न प्राविधिक टोली तत्कालै पठाएपनि विभिन्न बहानामा फोन सम्पर्क नहुँने ठाउँ गएर बस्ने गरेका छन् ।
दिक्तेलस्थित प्राधिकरणको कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक टोली भत्ताको लोभमा अवरुद्ध विद्युत तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नचाहने गरेको स्रोतको दाबी छ । “कार्यालयबाट आउने प्राविधिकहरु मासु र रक्सी खाएर बस्छन् ।” नाम नभन्ने सर्तमा एक व्यक्तिले भने, “उनीहरु गाउँमा आएर मोजमस्ती गर्दै बसेपछि अवरुद्ध विद्युत कसरी सञ्चालनमा आउँछ ? यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।”
जिल्लामा अलि बढी पानी पर्दा, अलि ठूलो हावा चल्दा र बाढी तथा पहिरो आउना साथ विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ । वर्षाद्को समयमा अवरुद्ध भएको विद्युत पुनः सञ्चालनमा ल्याउन करीब हप्ता दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।
बुइपास्थित सवस्टेशनबाट प्रदेश नं. १ अन्तरगत पर्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बू जिल्लाका उपभोक्तालाई विद्युत वितरण गरिएको छ । तीन जिल्लाका उपभोक्ताका लागि वितरण गरिएको विद्युतमा देखिएको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न टावर अनिवार्य रहेको रहेको विज्ञाहरुले बताएका छन् ।
उता, प्राधिकरण खोटाङका प्रमुख विजयराज रेग्मीले जिल्लामा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । “म भर्खरै सरुवा भएर आएको छु । यहाँका समस्याहरु पहिचान भइसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मिटरबक्स जडान गर्दा उपभोक्तालाई कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र कर्मचारीले कार्यालयमा व्यापार पनि गर्न पाउँदैनन् । यदि त्यस्तो रहेछ भने, उनीहरुमाथि कडा कारवाही हुन्छ ।”
जिल्लाभर केन्द्रीय प्रशारणलाइनको विद्युत उपभोग गर्ने १९ हजार ७६८ घरधुरी उपभोक्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वि.सं. २०५७ सालमा उद्घाटन गर्नुभएको केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विद्युत अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताको घरमा विस्तार हुन सकेको छैन् ।